Ukulwa -Ientyatyambo eziPhupha iiMpawu kunye neentsingiselo | Isichazi-magama samaphupha - Isichazi Magama Sephupha
UKUCHAZA UKUCHAZA-Iintyatyambo iiMpawu zePhupha kunye neentsingiselo
Ukulwa -Ientyatyambo eziPhupha iiMpawu kunye neentsingiselo
F - Amakhiwane
Ukulwa - Iintyatyambo
( Jonga Ukuphathwa gadalala, Isixhobo, Izixhobo )
zingaphi izityalo ezikwisijikelezi-langa
Ungqubano okanye ukungqubana noxinzelelo lwentlalo, ezinye iinjongo, okanye umbono wakho wokulungileyo nokungalunganga.
Jungian: Ukungqubana kwakho phakathi kwento esinqwenela ukuba yiyo kunye nento esiyiyo ngokwenene okanye indlela esizibona ngayo.
Idabi eliqhubeka phakathi kwengqondo kunye nengqondo, phakathi kwengcinga xa kuthelekiswa neemvakalelo, iimpawu zobudoda xa kuthelekiswa nobufazi, njl.
Ukukhulula umsindo kunye neemvakalelo ezinxulumene noko zithotywa, okanye esingenayo indlela efanelekileyo yokubonisa.
Ukugcwalisa Amaphupha eKhabhinethi
( bona iiMinyango, uLungiselelo )
Idrowa nganye okanye ifayile ekwikhabhathi imele inkumbulo, ulwazi, amava, okanye amanye amalungu akho olandelele ngokucocekileyo ukuba ubhekise kuwo okanye uwasebenzise.
Qaphela imeko yekhabinethi kunye neefayile. Ngaba zilungelelene kwaye zigcinwa kakuhle, kwaye ngaba zibonakala ngokungathi zisetyenziswa rhoqo? Ukuba kunjalo, eli phupha libonisa ukuba uwafaka onke amava kunye nolwazi lwakho kubomi bemihla ngemihla. Ukuba, nangona kunjalo, ezinye zeefayile (okanye iidrowa) zibonakala zitshixiwe, ziphawulwe 'ziyimfihlo,' okanye zithwele uthuli olunzima, oku kubonisa ukuba kukho into ekungajongwana nayo kwixesha elidlulileyo. Ngoku inokuba lixesha lokuvula le folda ukuze ingabi ngamathambo kwigunjana lakho, ulinde ukuvela kwelona xesha libi.
( bona Umzimba, Isandla, Imisesane )
Ukukhomba umntu okanye into ethile kubonakalisa isityholo. Ngenye indlela, kuseto lomlingo oku kunokubonakalisa ukuhambisa amandla ukuya kwinjongo ekujoliswe kuyo.
Umnwe emilebeni ubonakalisa ukuthula njengeyona ndlela ilungileyo yokwenza ngoku. Bamba amagama akho kwaye usebenzise eli xesha ukucinga ngezinto.
Ukuphakamisa iminwe emibini esembindini ngumqondiso okhuselayo kumaxesha amandulo, ukuthintela impembelelo 'yeliso elibi.' Cinga ngento oziva ukuba ufuna ukuzikhusela kuyo okanye ngubani kwaye kutheni.
Iminwe edumbileyo ibonisa ukungavisisani okanye umsindo ongakhange uqondiswe ngokwakhayo.
Umnwe ophakathi wesandla luphawu lwe-phallus, eneneni ebuyela e-Roma xa oonongogo beyisebenzisa ekutsaleni abathengi babo. Olu setyenziso lutshintshe kancinci lwaya ekuthukweni kwethu kwale mihla. Umbuzo apha kukuba isithuko sijolise kubani kwaye ngoba?
Iminwe enqamlezileyo ifanekisela iminqweno yakho kunye nethemba lakho.
Iinzipho zineempembelelo ezininzi. Okokuqala, babeyinxalenye eqhelekileyo yemilingo yokufumana amandla ngaphezulu kwenye. Okwesibini, kuxhomekeke kwindlela ezisetyenziswa ngayo ephupheni, ezi zinokuba luhlobo lwesixhobo. Ukongeza, iinzipho ngaphezulu kwebhodi emnyama zityhila ukucaphuka.
( Jonga ukubhaka, ikhandlela, iNtlekele, ukuQamba, iNtliziyo, isiHogo, oBomvu, iLanga, itotshi )
Ukuphupha malunga Inxalenye yoMlilo Unokuba namandla ngokweemvakalelo ngokuxhomekeke kwindlela amandla ayo abonakala ngayo ephupheni lakho.
Ukuba amandla omlilo akubiza, kunokuba luncedo ukuphatha 'umlilo' ukuphilisa ikristale nawe ngamaxesha onke. Carnelian lolunye lolona khetho lubalaseleyo ngeli xesha.
Isimboli yamadoda ubukhulu becala enxulunyaniswa nelanga kunye nokuthanda okukhulu. AmaMerika Omthonyama Ukongeza kholelwa ukuba imeko yomlilo ebonakalayo ephupheni ibonisa imeko yakho yeemvakalelo. Ngaba iyatsha ngaphandle kolawulo-okanye ilungiswe kakuhle?
Ukulunga ngaphezu kobubi. Umlilo ukhanyisa ubumnyama kwaye ugxotha izithunzi ezoyikisayo. Kukuphi iinkalo zobomi bakho oku kukhanya?
Utshintsho olukhulu. Le yindiza ye-phoenix ekufuneka ife kwindlwane yelangatye ukuze ivuselelwe.
Ukuphazamiseka ngokweemvakalelo okanye ukutshiswa kukutshisa. Jonga ukuze ubone ukuba yintoni kanye kanye oyibona njengokutsha.
Ukwazisa kunye nombono. Ngaphandle kokukhanyisa ukukhanya, umlilo wawusetyenziswa njengesixhobo sokubhula kwiinkcubeko ukusuka eGrisi yakudala ukuya kwiTibet. Eyaziwa ngokuba yi-pyromancy, iimboni zaziza kujonga kumthombo wedangatye, zibukele imifanekiso efuziselayo ukuba ivele ekuphenduleni imibuzo ebuzwayo.
Amandla emikhosi ekufuneka enomsindo kwaye alawulwe okanye aya kutshabalalisa endaweni yokuxhobisa.
IDramatics (igcwele 'i-flash kunye ne-fanfare').
Ukuqhekeka: Ukungahoyi okanye ukufulathela ubudoda, okanye ingqumbo emadodeni. Ngenye indlela, ukuba nomthombo wamandla omntu athathiwe.
Ukuhamba emlilweni: Ukuphendula kwakho ephupheni kula mava kubonisa indlela ohlangabezana ngayo nemeko eshushu ngakumbi.
Ukuhlala phakathi komlilo: Ukuhlala kwisiqhalo 'kwisihlalo esishushu.' Ngenye indlela, uhlobo lokuphupha iphupha lokufa apho umlilo ubhekisa kwiipyres zakudala apho kwakutshiswa imizimba ukukhupha umoya.
I-Campfires: Ukuzonwabisa okulula, ukuzonwabisa kwindalo, ukukhumbula amabali kunye namava asuka kulutsha ( Bona Iintsomi, Ababalisi ).
Yintoni etshisa apha inokubaluleka kakhulu kwintsingiselo yephupha lakho. Umzekelo, ukubona isakhiwo emlilweni kunokubonisa ukuba utshisa izixhobo / amandla omzimba wakho. Umlilo we-attic unokutyhila umntu onengqondo yakhe itshiswe ngokupheleleyo sisihloko esinye. Ukuphupha iimpahla ezivuthayo kufanekisela umnqweno wokuphelisa imifanekiso eyilwe eluntwini ukuze uzimele ngokunyanisekileyo.
Ukuphupha ngomlilo onamalahle apholileyo ngumfanekiso ombi kakhulu. Imele inkathazo, ukuphelelwa lithemba, kwaye kunokwenzeka nelahleko yothando phakathi kwabo bantu basondele kuwe ngenxa yokungaqondani. Zama ukufumana indlela yokubeka ubushushu obutsha kule meko.
( Bona Izinambuzane )
I-spark encinci ekhokelela ekukhanyeni nasekuqondiseni.
Isikhokelo somoya okanye utyelelo olusisiseko ( bona Angel, Fairy ).
Ngalo lonke ixesha khumbula intlantsi encinci inokudala umlilo omkhulu ke ukuphupha ngeplanbheri kungayinto yokuba into evuthayo nenomdla inokuba iza kubomi bakho.
Ngenye indlela, ukuba uziva ushukunyisiwe ngokwasemphefumlweni emva kokuphupha ngeempukane, inokuba liphupha eliqinisekileyo lokuba uza 'kutshiswa'.
Funda konke malunga Inxalenye yoMlilo ukuze ufumane ukucaciswa okungakumbi malunga nephupha lakho lomlilo.
( Jonga Izilwanyana, uMlambo )
Amaphupha malunga neentlanzi angabonisa izinto ezininzi ezahlukeneyo kodwa la maphupha ahlala eyimpawu ezinkulu.
Ukuphupha iintlanzi ngokuqinisekileyo kungabonakalisa imimangaliso, ngakumbi leyo yokubonelela, njengoko kubonisiwe kwibali likaKristu kunye nezonka kunye neentlanzi.
Iintsingiselo ezingakumbi zephupha lentlanzi:
Uphawu lweZodiac ye intlanzi .
Ukuzimisela ukuzala. Ezinye iintlanzi, njengeesalmon, zilwa nendlela yazo ngokuchasene nemisinga yamanzi ukuze iqabane.
NgokukaEdgar Cayce, iintlanzi ezimbi zimela ububi.
Ukuloba intlanzi: Ukubamba inqanaba lokomoya okanye lomntu.
AmaHindu athatha iintlanzi njengommeli wesisa kunye nokuhlangulwa ngexesha elifanelekileyo, ngakumbi kwimeko yeemvakalelo. Isiqalo sokuqala sikaVishnu sasiyintlanzi esindisa uluntu kumkhukula.
E-China, oku kufanekisela ukuchuma, ukuhlaziywa, kunye noxolo. Igama leentlanzi ngesiTshayina enyanisweni liyi-homophone ngobuninzi.
Elinye iphupha le icon, kuba iintlanzi zihambelana namanani amaninzi omhlanguli, kubandakanya neBhabhiloni yamandulo kunye ne-India.
Phakathi kwamaBuddha, uphawu lokwahlukana neminqweno kunye nokuncamathiselwa.
EJapan, ikhaphethi ngokukodwa luphawu lobume bendoda ( bona Amadoda ).
Ngokufanelekileyo umdlalo kumagama alumkisa malunga 'neentlanzi'.
Ukuzibona uloba kubonisa ukukhangela. Bukela ukubamba kwakho, nangona kunjalo, njengoko umlobothi wakho unokubamba isihlangu esidala ngokulula njengoko kunokuba ibhaso olifunayo!
Ukuphosa iminatha yentlanzi kutyhila umntu onoxanduva lokwamkela lonke ulwazi alufumeneyo njengenyaniso, ngaphandle kokucalula ulwazi oluhle kokubi ( bona iWebhu ).
Uhlobo ngalunye lweentlanzi lunokuba luphawu olwahlukileyo ngaphakathi kwephupha lakho. Umzekelo, iflounder ibonisa umntu osoloko ehexa kwaye engakwazi ukwenza isigqibo (umzekelo, 'ukusekwa ujikeleze'). Kwelinye icala, ipiranha ityhila ubuntu obulumayo, okanye obuxhalabele impumelelo nakweyiphi na indleko.
( Jonga iNumeri, iPentagram )
Ukuphupha iNombolo 5 liphupha elimangalisayo lokomoya.
Utshintsho lweemvakalelo, ezengqondo, ezomoya, okanye ezomzimba.
Ukhuselo nokhuseleko. Ipentekoste ye Knights Templar iboniswe njengenkwenkwezi eboniswe ezintlanu. Oku kwakusetyenziswa rhoqo ukukhusela abantu kwiliso elibi okanye kumlingo oyingozi.
AmaRoma amandulo: Umfuziselo wothando nokuzinikela. Amasiko omtshato waseRoma abonisa amakhandlela amahlanu avuthayo kulo msitho.
AmaSilamsi: Inani lemisebenzi engcwele: ukucoca rhoqo, ukunikela, ukuzila ukutya, ukuthandaza kunye nokuthatha uhambo.
Kwezinye iidemon zokuphupha, eli nani libonisa ukungazinzi okuhamba notshintsho. Mamela ilizwi lakho elingaphakathi, kwaye malikuholele kwicala elifanelekileyo.
Ukongeza, amaphupha ama-5 anokuba luphawu oluvela kumntu wakho ophakamileyo ukuba lixesha lokuba uqhagamshele kwi Izinto ezingcwele ezi-5 neentsingiselo neemfundiso zazo.
indoda ye-libra kunye ne-taurus yokuhambelana komfazi
Ukuphupha ngamanani kunokuba ngumqondiso wokuziphakamisa kwakho kukukhuthaza ukuba ufunde malunga noku Ukubhula kunye nentsingiselo engcwele yeNumeri .
Qiniseka ukuba usebenzisa eyethu Ukubala ngamanani kwaye ufumane iNdlela yakho yoBomi, ikamva lakho, ubuntu bakho, umphefumlo kunye neenombolo zomsebenzi!
( jonga iindawo, iPictografi )
Indlela yokuzazisa. Nguwuphi umfanekiso ovela kwiflegi, kwaye ithini ngesiqu sakho sokwenene?
Iiflegi ezibethekileyo zibonisa uhlobo oluthile lwemfazwe olwayo, ihlala ikwinqanaba leemvakalelo.
Ukuphakamisa iiflegi kubonisa imbeko kunye nokukhumbula izithethe.
Iiflegi eziphaphazela kwisiqingatha semasti zimele ukufa kwangempela okanye okomfuziselo, okanye uhlobo oluthile lwesikhumbuzo. Oku kunokuba yimeko nayo, njengokufa kobudlelwane, okanye ukuphela komsebenzi.
Ukuzinikela kunye nokuzinikela. Iflegi ibonakala kwimeko enjani? Ukuba ikrazulwe kubini, oku kunokumela ukunyaniseka okwahlukileyo okanye ukungqubana komdla. Qaphela ilizwe, ilizwe, okanye isixeko iflegi emele ukuqonda ngakumbi.
( Jonga iZinyithi )
( jonga iiNtlekele, uMlambo, aManzi )
Amanzi afuzisela i-subconscious. Funda malunga ne Isixhobo samanzi ukuze uqonde ngcono ukuba iphupha lakho lizama ukukuxelela ntoni.
( bona Izakhiwo )
Njengalo naliphi na icandelo lesakhiwo, oku kunokumela umzimba-umgangatho wonyawo. Imeko yomgangatho emva koko iba sisitshixo sokuphupha. Umzekelo, umgangatho oqhekekileyo unokubonisa imeko zolusu okanye ukukhula kokungunda kweli candelo lomzimba. Okanye, ngokuzekelisayo, eli phupha liveza ukuba awunakujonga apho uhamba khona, ngaloo ndlela uzibeka engozini.
Iinkqubo zakho ezikholelwayo. Ubonakala njani umgangatho? Lowo ukhazimliswe kakhulu ubonakalisa umntu ococekileyo ngokomoya wangaphandle ukubhenela kulindelo lwabanye. Umgangatho obolileyo ubonakalisa indlela engeyiyo eya kuthi ekugqibeleni ikhokelele ekuweni. Imigangatho engalinganiyo ityhila umntu onengxaki yokugcina ulungelelwaniso phakathi kokholo kunye nenyaniso, eyesiqhelo neyesoteric.
( jonga ngohlobo, Ibala )
Funda konke malunga Umbala Psychology kunye nentsingiselo yemibala ...
Ukuzaliseka kunye nokuqola kuwe, umsebenzi, okanye ubudlelwane.
Phanda intyatyambo ethile ngeminye imibutho eneenkcukacha. Uninzi lunolungelelwaniso nezidalwa zikaThixo, amanani embali, kunye neempawu zemveli. Umzekelo, inyibiba ihlala ingumfuziselo kaKristu, iroses ihlala ingumfuziselo kaMariya, uMama uthixokazi, kunye neNgilani, kwaye i-lavender ichaza ulonwabo oluhlaziyiweyo.
Amaxabiso obuqu, isimilo, kunye neempawu ezihluma kwindawo ephambili.
Ukuvela njengomnikelo: Jonga Isibingelelo, Idini .
Ukuqokelela egadini: Isimanga esimnandi, kuxhomekeke kwintyatyambo. I-Buttercups ibonakalisa ishishini eliyimpumelelo, ii-carnations zixela kwangaphambili uthando, irises ukuqikelela unxibelelwano oluvela kumntu omkhumbulayo, kunye ne-primroses luphawu lobuhlobo obutsha.
Ukufa okanye ukubuna: Ukuphazamiseka kobuntu, izifo zomzimba, okanye ukunciphisa amandla okuphelisa ubuhle bangaphakathi.
Ngealchemically, olunye uphawu lomphefumlo, njengoko amagqabi ephuma kwiziko, njengomzimba ojikeleze umoya.
Ukuvula iintyatyambo kubonisa amandla, ithemba, kunye nobungqina bokuqala bokubonakaliswa ngokubhekisele kwiinjongo zakho.
AmaVictoria asebenzisa iintyatyambo ukunxibelelana nemiyalezo kunye nenkqubo ekhethekileyo yokubhula apho iintyatyambo nganye zithetha into eyahlukileyo. Cinga ukuba amagama akho ajolise kwimvakalelo yeentyatyambo ezinokuthi zixatyiswe okanye zinokungaxatyiswa kwaye ziqondwe ngumamkeli.
yintoni iplanethi esondele elangeni
onke amakhadi e-tarot kunye neentsingiselo zawo
izinto ezinxulunyaniswa nenyanga ka-Agasti
ziphi iiplanethi ngoku ukuvumisa ngeenkwenkwezi
i-aries yabasetyhini kunye ne-scorpio yokuhambelana kwamadoda